Dhulgariir labaad oo xoog leh ayaa ku dhuftay bartamaha Filibiin Talaadadii
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Ammaanka » Dhulgariir labaad oo xoog leh ayaa ku dhuftay bartamaha Filibiin Talaadadii
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Filibiin News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dhul gariir cusub oo xoog leh ayaa ku dhuftay bartamaha Filibiin Talaadadii, maalin ka dib markii dhul gariir cabirkiisu yahay 6.1 uu ruxay waqooyiga dalka waxaana ku dhintay ugu yaraan 16 qof.
Sahanka cilmiga dhulka ee Mareykanka wuxuu ku sheegay cabirka dhul gariirkii dhacay Talaadadii 6.4, halka wakaalada dhul gariirka dhulka ay sheegtay inay ahayd 6.5.
Dhul gariirku wuxuu udub dhexaad u ahaa magaalada San Julian ee bariga Samar Samar wuxuuna ku kallifay dadka deegaanka inay ka baxaan guryaha.
Ma jiraan wax war ah oo ku saabsan qasaaraha ka dhashay dhul gariirka cusub.
Fasallada iyo shaqada xafiiska ayaa laga joojiyay San Julian, halkaas oo dildilaaca waddooyinka, dhismayaasha yaryar, iyo kaniisad la soo sheegay.
dhismayaasha khasaare Bartamaha kaniisad fasalada dildilaaca dhaawac dhintay dhulgariir Eastern Sahanka Sahanka dhacay guryo magnitude Shaqaalaha North xafiiska dad dhintay Filibiin xoogbadane gobolka Dhul gariirka sidaana wararka deganayaasha waddooyinka labaad yar weeraro xoog strong earthquake sahan joojisey magaalada